Mogadishu Journal » Tababaraha Man Utd Solskjaer ayaa qaatay tababarka iyadoo kooxdu ay iska joojisay inay isbedel sameyso
Tababaraha Man Utd Solskjaer ayaa qaatay tababarka iyadoo kooxdu ay iska joojisay inay isbedel sameyso
Ole Gunnar Solskjaer ayaa tababar ku qaatay Manchester United talaadadii iyadoo tababaraha cadaadiska saaran uu u muuqday mid ka fogaanaya inuu waayi doono shaqadiisa hadda.
Guuldaradii 5-0 ahayd ee ka soo gaartay Liverpool axadii ayaa aheyd dhibcii ugu hooseeyay ee uu macalin u ahaa Norwey, iyadoo guuldaradii seddexaad ee xilli ciyaareedka Premier League ay United 8 dhibcood ka hooseyso hogaamiyaasha hore ee Chelsea.
Kooxdiisii ​​​​koowaad waxay dib isugu soo uruuriyeen xerada tababarka kooxda ee Carrington laba maalmood ka dib burburkaas, iyadoo Solskjaer uu weli hoggaanka hayo. Waxaa la sheegay in uu aroornimadii hore ee saaka soo gaaray si uu ciyaartoydiisa u mariyo jidkooda.
Saraakiisha sare ee United ayaa la sheegay in ay kulan yeesheen Isniintii, iyadoo guddoomiye ku xigeenka fulinta Ed Woodward uu ku biiray agaasimaha maamulka Richard Arnold iyo la-guddoomiyaha Joel Glazer.
United ayaa dhowr jeer taageertay tababaraha reer Norway, kaasoo shaqada kala wareegay Jose Mourinho bishii December 2018, markii hore si ku meel gaar ah. Waxay u tixgeliyaan weeraryahankii hore ee United shaqsi ku habboon, Solskjaer ayaana weli ah shaqsi caan ka ah taageerayaasha, xitaa kuwa doonaya beddelka tababaraha.
The Guardian ayaa soo wariyay Talaadadii in Solskjaer uu weli haysto taageerada Woodward, Arnold iyo tababarihii hore ee United Alex Ferguson, iyadoo Joel Glazer uu go'aanka kama dambaysta ah yeelan doono. Sidoo kale, The Telegraph ayaa sheegtay in Solskjaer la siiyay seddex kulan si uu u muujiyo inay tahay in la sii hayo.
United ayaa ka digtoonaan doonta in ay xilka ka xayuubiso Solskjaer hadii aanu jirin musharrax ku haboon oo badali kara 48 jirkan, calaamadihii ugu horeeyayna waxa ay tilmaamayaan in uu sii ahaan doono tababaraha kulanka sabtida ee Tottenham. Waxaa ku xiga ciyaaraha Atalanta iyo Manchester City.
Tababarihii hore ee Chelsea, Inter, Juventus iyo Italy Antonio Conte ayaa lala xiriirinayaa inuu yahay badalka suurtogalka ah, waxaana la sheegay inuu u furan yahay fikradda; Si kastaba ha ahaatee, Zinedine Zidane ma xiiseynayo shaqadaan, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain, halkaasoo uu labo jeer soo maamulay Real Madrid.
Niyad jabkii Solskjaer ka dib guuldaradii Old Trafford waxay ahayd mid cad, isagoo yidhi: "Weligay ma dareemin wax ka xun tan tan, tani waa tii ugu hoosaysay, waan aqbalay mas'uuliyadda, taas maanta anigaa iska leh, anigana horay ayaan u socdaa.
“Waan aaminsanahay naftayda, waxaana ku soo dhawaanayaa waxa aan kooxda ka doonayno, natiijadu waayadan kuma filna Tani oo leh qaab maskaxeed sax ah."
Bishii Luulyo, Solskjaer ayaa qandaraas cusub oo seddex sanno ah u saxiixay United, kooxduna waxay ku taageertay sidii Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho iyo Raphael Varane ay ku biireen intii lagu jiray suuqa kala iibsiga.
Celcelis ahaan waxa uu haystaa rikoorka dhibcaha 1.83, kaas oo ah kan saddexaad ee ugu sarreeya taariikhda Premier League ee United. Marka loo eego dhinacaas waxa uu kaliya raadraacay hogaamiyihii ka horreeyay Mourinho (1.89) iyo Ferguson oo muddada dheer soo shaqeeyay (2.16).
DEG DEG: Beesha caalamka oo War ka soo saartay dagaalka ka sii socda degmada Guriceel
Ahlu Sunna oo Dib u celisay Gaadiid dagaal oo ka qabsadeen Ciidanka Dowlada (Sawirro)